Dugsiga Sare ee Boorama Lagu Magacaabo oo Maanta Lag Furey Boorama
Boorama(ALSHAHID) Waxaa maanta xaflada aad u qurux badan oo lagu qabtey madasha laga dhisey dugsiga sare ee Boorama lagaga dhawaaqey in si rasmi ah loo furey dugsigaas kaasi oo dhamaanba maadooyikiisu ay ku bixi doonaan luuqada Carabiga ,dugsigan aya waxaa hirgalisay ururka lagu magacaabo ururka Dacwda Islaamka oo ah urur samafal Suudaani kaasi oo lacagta [...]
Alshabab oo dadweynaha Kismaayo u sheegay inay magaalada uga baxaan mudo 24-Saac gudahood ah
Kismaayo (Alshahid)- Sida ay baahinayaan qaar ka mid ah Idaacadaha Maxaliga ah, waxaa Shalay galinkii dambe lagu arkayay magaalada Kismaayo gudaheeda Gaadiid lagu xiray Cod-baahiyayaal oo ay saaranyihiin qaar ka mid ah dagaalyahannada Alshabab, kuwaas oo u sheegayay dadweynaha magaalada ku nool inay muddo 24-Saac gudaheed ah uga baxaan magaalada. Inkasta oo aan la sheegin [...]
Gudiga doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo shaaciyay tirada murashaxiinta illaa iyo iminka ay diiwaan-galiyeen
Mogadishu (Alshahid)- Guddiga doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in illaa 22 murashax oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ay illaa iyo haatan lasoo xiriireen guddiga isla markaana la diiwaan-galiyay loona diray howllaha muhiimka ah ee ay tahay inay murashaxiintu soo maraan marka ay Is-diiwaan galinayaan. Cusmaan Libaax Ibraahim oo ah afhayeenka guddigan ayaa [...]
Dagaalo ay dad ku dhinteen oo Maliishiyo Beeleedyo ku dhex maray Gaalkacyo
Gaalkacyo (Alshahid)- Dagaalo ayaa ka dhex qarxay Maliishiyaad kasoo kala jeeda Laba Beelood oo ku wada nool deegaanno ka tirsan magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug. Dagaaladan ayaa waxay salka ku hayaan khilaaf soo kala dhex galay Maliishiyaadkan, waxaana inta la ogyahay ku dhintay Hal ruux, mid kalena waa uu ku dhaawacmay. Sida ay Goob-joogayaashu sheegeen. [...]
Madaxweyne Shariif oo dalka kusoo laabtay iyo dadweyne tiro badan oo soo dhawayntiisa isugusoo baxay
Mogadishu (Alshahid)- Madaxweynaha dowladda KMG-ah ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa Shalay galinkii dambe dib ugusoo laabtay magaalada Muqdisho. Waxaana madaxweynaha kusoo dhaweeyay magaalada Boqolaal dadweyne ah oo Wadooyinka illaa Garoonka diyaaradaha si xiriir ah u safnaa. Dadka soo dhawaynayay madaxweynaha ayaa waxaa ay isugu jireen Haween iyo rag, waxayna intooda badan ku labisnaayeen Dhar [...]
Tiro dad iyo Xoolo oo ku dhintay Dab ka kacay gobalka Hiiraan
Moqokori (Alshahid)- Dab xoogan ayaa wuxuu ka kacay deegaanka Moqokori ee gobalka Hiiraan, halkaas oo tiro dad ah iyo Xoolo ay ku naf-waayeen. Dabkan wuxuu kacay Xalay, waxaana meesha ay Musiibadani ka dhacday ay ahayd goob Miyi ah oo ka tirsan deegaanka Moqokori ee gobalka Hiiraan. Aqalo badan oo ay dadku ku noolaayeen, ahaana kuwo [...]
Musharax Dr Craxmaan Cshakuur: “Wadahadalka Somaliland waa ka waynyahay in Olole Doorasho loo isticmaalo”
Muqdisho (Alshahid) - Xaflad si heersare ah oolagu xusayey Sanadkii 52aad ee Xoriyadii Soomaaliya iyo Midnimadii labada Gobo lee Waqooyi iyo Koonfur, islamarkaana lagu soo dhowaynayey Musharax xilka madaxweynimo ee Soomaaliya Dr C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladda oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka Dhalinyarada Xoriyo kana soo qaybgaleen Siyaasiyiin, Xildhibaano, Odayaal [...]
Xildhibaan C/raxmaan C/Shakuur oo si rasmi ugu dhawaaqay Inuu u tartamayo Xilka madaxtinimada Somaliya
Muqdisho (Alshahid): Marti sharaf lagu casuumay xaflad si heer sare ah loo gaasimay oo ka dhacday hoolweyn oo si qurux badan loogu sharaxay calanka somaliya iyo Masawirka Murashaxa C/Shakuur ayaa subaxnimaddii hore Sabtida ku qulqulay hotelka safari ee magaalada Muqdisha. Siyaasiyiin can ah, culumaaudiin, salaadiin, dhalinyaro iyo haween tirabadan ayaa Dhamaantood ruxayey calanka somaliya ka [...]
Beesha Reer Baraawe oo baaq ay ku taageerayaan Ergada uu odey dhaqammedkooda u direy Xamar
Manchester: Kulan weyn oo ay isugu yimaadeen beesha reer Baraawe oo kulmiyey odayaal, aqoonyahan, dumar iyo dhalinyaro ayaa waxay ku soo saareen baaq ay ku taageerayaan ergada oday dhaqameedkooda Avv. Axmed Maxamed Catiiq uu u direy inay kaga qayb galaan Guddiga Odaydhaqameedyada ee u sugan Muqdisho. Kulankaas oo lagu qabtay magaalada Manchester ee carriga Ingiriiska [...]
June 26, 20121 CommentRead More
Ayadoo laga ambaqaadayo shirkii London ee bishii February ee sanadkan oo looga arrinsanayay Soomaaliya ayaa garwadeenada (Jiliyaasha) dhinaca siyaasadda iyo ururada bulshada ee xilligan waxay ku shirayaan mar labaad Istanbuul si ay diiradda u saaraan “Diyaarinta Mustaqbalka Soomaaliya ” (Pre paring for Somali’s Future). Hayadaha samafalka Soomaaliya ayaa kulmay si ay ugu gudbiyaan talo bixin [...]